Nhau - Indasitiri kunyorera uye kupatsanura kweanotonhora mafeni mafekitori
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti isu hatisi kukurukura mafekitori mafeni ezve zvigadzirwa zvakagadzirwa (senge kutonhodza uye kufefetedza michina yenzvimbo dzakareba senge maindasitiri emiti, zvigadzirwa zvekuchengetedza, dzimba dzekumirira, dzimba dzekuratidzira, nhandare, supamaketi, migwagwa mikuru, tunnel, nezvimwewo), Uye ndeyayo yekushandisa kupisa kupisa dissipation yezvinhu zvemaindasitiri zvigadzirwa-maindasitiri kutonhora fan.
Maindasitiri zvinhu, saka zvinoreva kuti zvigadzirwa zvakadaro hazvizotengeswe zvakananga kune vatengi, uye iwo ari kupisa dissipation application zvinoriumba kana chikamu chezvinhu zvekushandisa (nekuti mukuwedzera kune feni kufefetedza uye kupisa kupisa, kune zvakare kupisa singi uye mvura inotonhorera kupisa kupisa Uye mamwe mashandisiro ekupisa ekupisa).
Maindasitiri anotonhodza mafekitori anogona kushandiswa munzvimbo dzakasiyana siyana dzekushandisa, kubva pamuchina weaerospace kuenda kumabhurashi emazino emagetsi. Zvinhu zvakadai zvinotonhora zvinogona kushandiswa.
Midziyo yemumba nemahofisi emagetsi zvigadzirwa ndezvigadzirwa zvemaindasitiri zvine kudiwa kukuru kweanoda mafekitori anotonhorera fan fan, asi zvakare ane izvo zvakanyanya zvinodiwa kune yakakura-chiyero chigadzirwa kuburitsa kugona. Nekudaro, nekuti zvigadzirwa zvakadaro zviri zvechivanhu-giredhi maindasitiri zvigadzirwa zvakagadzirwa, kupisa kupisa kudzora kwezvigadzirwa hazvina kukwirira. Musika wechigadzirwa unokwikwidza zvizere. Sezvo zvigadzirwa zvakadaro zvisina zvakakwirira zvinodiwa kuti zvirambe zvichishanda mashandiro, kupisa kupisa kudzora, uye kupisa kupisa kudzora kwechigadzirwa chinoshanda nharaunda, hapana yakawandisa mharidzo muchikamu chechigadzirwa cheiyo yakatwasuka network portal yeiyo maindasitiri fan network.
Iwo maindasitiri emafekitori anotonhorera fan fan akanyorwa muiyo Industrial Fan Network anonyanya kushandiswa mumaindasitiri mazhinji senge kufefetedza, firiji, kudziyisa, mota, dhiraivha tekinoroji, simba remagetsi, UPS magetsi, mwenje we LED, michina yemagetsi, michina yekutaurirana, zvekurapa , zvishandiso, nezvimwewo, Chikamu chakakosha chekupisa kupisa uye kutonhodza zvikamu zveayo maindasitiri akapedza zvigadzirwa.
Maindasitiri kutonhodza zvinhu-kutonhora fan chigadzirwa kusarudzwa kwakakosha kune kugadzikana kwechigadzirwa mashandiro, senge chigadzirwa kumhanya, mweya vhoriyamu, static kumanikidza, ruzha, hunyoro uye guruva kuramba, isina mvura chiyero, inotakura zvinhu, indasitiri-yakatarwa chitupa parameter, Zvese zvakakosha mareferenzi ekusarudzwa kweanotonhora mafeni ezvemaindasitiri zvigadzirwa.
Maindasitiri anotonhodza mafekitori anoenzanisirwa zvinoenderana nekwekufema kwemhepo, uye anogona kuganhurwa muzvikamu zvitanhatu: axial kuyerera, kuyerera kwakasangana, kuyerera kwema centrifugal, kuyambuka kuyerera (kuyambuka kuyerera), blower, uye bracket (isina mafeni) mafeni. Hunhu hwayo hwokugadzira hunotevera:
Hunhu hwayo: yakakwira kuyerera chiyero, yepakati mhepo kumanikidza
Iwo mashizha eanxial fan anosundira mweya kuti uyerere munzira imwechete seya shaft. Iyo impeller yeanxial fan yakafanana neinofambisa. Kana ichishanda, yakawanda yemhepo inoyerera inoenderana neiyo shaft, mune mamwe mazwi pamwe neiyo axis. Kana iyo yekupinda yemhepo iri yemahara mweya ine zero static kumanikidza, iyo axial kuyerera fan ine yakaderera simba simba rekushandisa. Kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge waita basa, iro simba rekushandisa rinowedzera sezvo mweya wekudzokera kumashure uchikwira Mafeni eAxial anowanzoiswa mukabati yemidziyo yemagetsi, uye dzimwe nguva inosanganiswa pamota. Nekuti iyo axial fan ine compact dhizaini, inogona kuchengetedza yakawanda nzvimbo, uye zviri nyore kuisa uye kushandiswa zvakanyanya.
Hunhu hwayo: yakaganhurirwa kuyerera chiyero, yakasimba mhepo kumanikidza
Centrifugal mafeni, anonziwo ma centrifugal mafeni, kana achinge achishanda, iwo mashizha anosundira mweya kuti uyerere uchienda nenzira yakatarisa kune iyo shaft (kureva radial), mweya unofambidzana uri padivi peiyo axis mirayiridzo, uye nzvimbo yekubudisira mweya yakanangana kune iyo axis mirayiridzo. Muzviitiko zvakawanda, iyo inotonhorera mhedzisiro inogona kuwanikwa nekushandisa axial fan. Nekudaro, dzimwe nguva kana kufefetera kwemhepo kuchida kutenderedzwa nemadhigirii makumi mapfumbamwe kana kana panodiwa mhepo kumanikidza kwakakura, fan fanicentrifugal inofanira kushandiswa. Chaizvoizvo kutaura, mafeni ivowo vane centrifugal mafeni.
Zvimiro: diki kuyerera kwemhepo shanduko, yakakwira volumetric kushanda, hupenyu hurefu hwebasa, uye kunyarara kwakanaka
Chinhu chinoshanda cheanofuridza ndechekuti kumanikidzwa kwemweya kunowanzoitwa pasi pechiito cheuto re centrifugal kuburikidza neanoverengera anoshanda emhepo (kana nhanho dzinoverengeka). Iyo blower ine yakakurumidza-kutenderera rotor. Iwo mashizha pane rotor anotyaira mhepo kuti iende nekumhanya kwakanyanya. Simba re centrifugal rinokonzeresa mweya kuyerera mukaseti isina kuumbika pamwe neakasangana neiyo fan fan. Iyo yekumhanya-mhanya yemhepo ine kumwe kumanikidza kwemhepo. Mhepo nyowani inopinda uye inowedzera kubva pakati pekasi.
Muchinjikwa kuyerera fan
Hunhu hwayo: yakaderera kuyerera chiyero, pasi mhepo kumanikidza
Muchinjikwa kuyerera fan fan inonzi zvakare muchinjikwa kuyerera fan, inogona kuburitsa yakakura nzvimbo yekuyerera kwemhepo, inowanzo shandiswa kutonhodza iyo hombe nzvimbo yemidziyo. Iyo yekupinda uye yekubuda kweiyi fan yakanangana neiyo axis. Iyo yekuyambuka kuyerera fan inoshandisa yakareba yakareba dhiramu-yakaita fan fan impeller kushanda. Iyo dhayamita yebara-yakaita fan fan reza iri rakakura. Nekuda kweiyo dhayamita yakakura, inogona kushandisa yakaderera kumhanya pahwaro hwekuona kutenderera kwese kwemhepo. , Deredza ruzha runokonzerwa nekumhanya-mhanya kushanda.
Bhureki (isina chigadziko) fan
Hunhu hwayo: yakaderera mhepo kumanikidza, yakaderera velocity, yakakura nzvimbo
Iyo bracket fan inowanzoshandiswa mukupisa kupisa kwePCB redunhu bhodhi. Inogona kushandiswa neyekupisa singi yeiyo system wedunhu bhodhi kuti ibudise nzvimbo yakakura yemhepo kuyerera. Iyo inowanzo shandiswa kutonhodza iyo hombe nzvimbo yechishandiso pakupisa kupisa.
Iyo yemhepo vhoriyamu yeiyo isina mafeni fan inowedzera, uye fan fan inotora dhizaini dhizaini yekuwedzera iyo yekuwedzera mweya yekudyira. Panguva imwecheteyo, fan isina murazvo ine zvirinani mbeveve mhedzisiro
Plastiki Fan Guard, Hvac Fan Anodhonza, 12cm Ac Axial Fan, Simbi fan fan, Metal Grill Fan 80mm Chengetedza, 172mm Ac Axial Fan,